Totonham Oo Premier League Kusii Heyneysa Aguero Kaas Oo Ah Mid Xor Ah.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Totonham oo premier league kusii heyneysa Aguero kaas oo ah mid xor...
Sergio Aguero ayaa ka fiirsan doona inuu si lama filaan ah ugu dhaqaaqo Tottenham marka qandaraaskiisa Manchester City uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedka, sida ay sheegayaan wararka cusub.
Halyeeyga City ayaa xaqiijiyay inuusan sii wadan doonin kooxda isla markaana uu qarka u saaran yahay inuu u sii gudbo daaqad cusub sanadihii ugu dambeeyay ee xirfadiisa.
Laakiin Aguero, oo 32 jir ah, ayaa ka go’an inuu ku sii nagaado Premier League, Tottenham ayaa ka mid ah kooxaha uu u tixgelin doono inuu u ciyaaro si ay tan uga dhigaan mid dhab ah, sida laga soo xigtay Telegraph.
Sida ay horay u soo weriyeen Sportsmail, Thomas Tuchel ee Chelsea ayaa haatan u taagan sidii ay u heli lahaayeen weeraryahan halyeeyga ah oo xor ah xagaagan Hadana.
Telegraph ayaa hada qeexeysa in Aguero ‘uu diyaar u yahay inuu ka hormariyo kubada cagta Champions League’ isla markaana uu u arko Spurs inay tahay halka ugu macquulsan natiijada.
Naadiga waqooyiga London ayaa haatan fadhisa kaalinta lixaad iyagoo leh 49 dhibcood 30 kulan oo ay ciyaareen, seddex dhibcood ayeey ka danbeeyan kooxda ay xafiiltamaan ee London west Ham oo haatan kaalinta afaraad ku jirta.
Ka dib qaab ciyaareed xun oo uu sameeyay macalin Jose Mourinho, Spurs ayaa haatan loo arkaa inay yihiin kuwa banaanka ah si ay u diiwaan geliyaan afarta koox ee ugu sareysa iyadoo ay jiraan kulammo adag.
Spurs ayaa loo badinayaa inay suuqa ugu jiraan weeraryahan heer sarre ah xagaagan, iyadoo hadalkii sii kordhayay ee talisman Harry Kane uu diyaar u yahay inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo waqtiga uu la joogo kooxda isla markaana uu raadsado tallaabo weyn.
Ka bixitaanka Kane ayaa laga yaabaa inuu kicinayo isku soo wada duuboo weeraryahano waa weyn oo isweydaarsanaya naadiyada, iyadoo kabtanka England sidoo kale lala xiriirin doono inuu yahay bedelka mustaqbalka fog ee Aguero ee Etihad.
Inkasto oo uu xidiga reer Argentine sidoo kale si kulul ugu kululaaday inuu ku laabto LaLiga isla markaana uu xiriir la yeesho Lionel Messi kooxda Barcelona, waxaa la sheegay inuu ‘aad ugu baahan yahay inuu kusii nagaado Premier League’ si uu u burburiyo rikooryo taariikhi ah.
32-jirkan ayaa haatan ku jira kaalinta afaraad ee gooldhalinta Premier League, iyadoo uu 181 gool uu dhaliyay kaliya lix gool ka danbeeya Andy Cole 187 oo seddexaad ku jiro.
Rikoorka Alan Shearer ee 260 gool ayaa laga yaabaa inuu yahay hadaf aan la heli karin oo uusan gaari karin Aguero laakiin labo ama seddex sano oo dheeri ah oo England ah ayaa laga yaabaa inuu ka gudbo Rikoorka Wayne Rooney oo leh 208.
Previous articleArsenal oo dib u cusbooneysiisay xisiihii ay u qabeen Zaha.
Next articleXagee ayeey marayaan wadahadaladii u dhaxeeyay barcelona iyo Eric Garcia.